Oduu Durii: Sangoota Sadii fi Waraabessa - OPride.com
Lolee Waayyuu irraa*
Bara durii keessaa, sangoota sadii bifaan: Adii, Burreefi Gurraacha ta’an jaalalaan bosona keessa waliin jiraatu turan. Garuu guyyaa tokko jaalala fi tokkummaan jireenyi isaanii waraabessatti dhagaahame. Waraabo inaafe mala ittin adda isan baasu barbaadu eegale.
Waraabessichi yeroo mara sangootni kun waliin waan jiraataniif itti siqee waa isaan gochuu hin dandeenye ture. Gaaf tokko garuu ka’ee sangoota kana akkamittiin akka adda baasee tokko-tokkoon isaanii nyaatee fixuu mala qopheesse.Akkuma beekamu waraabessi yeroo mara halkan waan deemuuf: bifa isaaniitiin adda qoodee nyaachuuf karoorfate.
Guyyaa tokko halkan dhaqee sangaa isa Gurraachaa fi Burree kophaatti waamee, “Maali isin akkamitti isa Adii kanaa wajjin jiraattuu? Bineensi bifa isaa kanaan fagootti isin argee dhufee isin nyaachuu danda’a, isa of keessaa baasaa,” jedheen. Isaanis mala isaa waan hin beekiniif dhuguma nutti himaa jira jedhanii hiriyaa isaanii kan bara hedduu, sangaa isa Adii, kophaatti isa hambisan. Saniin booda waraabessi akka isaan isa qophaatti hambisan waan beekuuf duuba deebi’ee sangicha isa Adii kophaatti argatee nyaate.
Guyyaa lammaffaa ammoo sangaa isa Gurraacha qophaatti waamee, “Maali argitaa bifa isaa kanaa? Bineensi fagootti isin argee isin nyaachuu dandaa’a bar; maaf isa of biraa hin ariituu?” jedhee ammas adda isaan baase. Amma sangaan Gurraachii fi inni Burreenis adda baahaniiru. Sana booda tokko tokkoon lamaan isaanii nyaatee fixe jedhama.
Asirraa kan nuti hubachuu dandeenyu diinni yoomiyyuu tokkummaa, gammachuu fi jaalala hiriyaa hin jaal’atu.“Tokkummaa’an cimanii dhaabatu; adda faffacaa’an kufaatii irra bu’u” akkuma jedhame nutis egaa akkuma sangoota sadeenii taanee laataa? kan jedhu gaaffii ani Oromoo maraaf qabu.
oromo stories oromo wisdom tales unity
Cittoo fi Dhukuba Garaa
Abbaa Booruu says:
Yaadni kee hedduu barnoota namaaf kennaa. Eeyee dhugaa keetii Habbshaan haalumaa kana nut gargaramitee tokkummaa nu-dhabsiisudhan nu-fafacaasaan bilisummaa keenya gara boodat nu jala anbiisaan. Kun immoo damaqiissa dhabiina keenya irraa kan ka’edha. Mee kan darbee darbeera kan gar-fuuldurat haa jabaannu!!
oromia oduu durii says:
wow nice work but i want ask u one thing i have more than 700 oduu durii that i collecte i want share with u ……and how
Heddu bareeda wa iraa baranii nuuf ittii daraa oduu durii kana
Tun tan amma wayyaaneen ittijiru